दमौलीमा कोरोना भित्रिएको खबर साँचो हो त ?
सामाजिक सञ्जालमा जताततै कोरोना भित्रिएको पोष्ट व्याप्त भए पछि हामीले यसको वास्तविकता जान्न सम्बन्धित निकाय स्वास्थ्य कार्यालय पुग्यौं । के साँच्चि नै तनहुँमा कोरोना भित्रिएको हो त ? सुनौं स्वास्थ्य प्रमुख शंकरबाबु अधिकारी- बाईट
केही दिनयता दमौलीमा कोभिडको त्रासबाट मुक्त भएर पनि होला विहान र दिउँसो पनि मानिसको चहलपहल निकै बढेको थियो । कतिपयले यसलाई लापरबाही भने त अन्यले बाध्यता । तर जे भने पनि शुरुका तुलनामा दमौलीमा लक डाउन तोडिने घटना बढेको साँचो हो ।
तर मंगलबारबाट भने अवस्थामा केही सुधार देखिएको छ । कोभिड १९ पोजिटिभ नदेखिएको भए के हामी पूर्ण सुरक्षित छौं त ? ७२ किलोमिटर लामो राजमार्ग ओगटेको तनहुँमा दैनिक अत्यावश्यक सवारी साधन सञ्चालन भैरहेका छन् । दमौलीमा तीन दिनका अवधिमा भारतीय सीमावर्ती सहरबाट ४ जना व्यक्ति भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ । तीमध्ये एक जना फिर्ता भए भने अरु दमौली र बन्दीपुरको क्वारेन्टाइनमा छन् । नागरिक ढुक्क हुने भन्दा सचेत हुनुपर्ने सरकारी अधिकारीको भनाई छ ।
पछिल्लो समय तनहुँमा पिसिआर परीक्षण पनि भैरहेको छ । संकास्पद बिरामी र सम्भावित त्रास भएका व्यक्तिको आरटिडीपछि पिसिआर परीक्षण पनि भैरहेकाले केही आस्वस्त त पारेको छ । तर यसले दमौलीमा केही दिनयता देखिएको चहलपहललाई भने पूर्णतः गलत नै रहेको सन्देश दिएको छ ।
देशभर संख्या निकै ठूलोस्तरमा बढ्न थालेकाले अत्यावश्यक बाहेकका काममा घरबाट बाहिर ननिस्कनु नै कोभिड संक्रमणबाट जोगिने अचुक औषधी हुन सक्छ ।